Forum serasera malagasy Tsy maintsy manam-bola ve na manam-pahaizana vao ho sambatra ? - Dinika forum.serasera.org
Tsy maintsy manam-bola ve na manam-pahaizana vao ho sambatra ?
Fitohizan'ny hafatra : Tsy maintsy manam-bola ve na manam-pahaizana vao ho sambatra ?
xxx - 31/07/2003 13:36
Mahagaga ny fiaraha-monina fa rehefa tsy mifanaraka @ ny eritreriny dia toa tsy mety foana, ary ambaniana ilay olona.
Misy ny olona tsy manana diploma na iray aza nefa sambatra izy eo @ fiainany satria manana ny tena fitiavana. dia fa maninona ny fiaraha-monina no mametraka olana foana, ohatra ny hoe misy fepetra ny fahasambarana sy ny fitiavana ?
xxx - 01/08/2003 18:29
Ny fiarahamonina dia tsy maintsy mahita ambara foana eo @ fiainana sy ny fitiavana, izany hoe misy foana ny mpanao kritika.
Noho izany ny hevitro dia tsotra: ny maha mety ny fiainanao ataovy, izay mantsy no hany fomba iray hahatsapanao sy ahitanao ny fahasambaraNAO satria raha izay vavan'ny hafa foana no henoinao dia tsy mba ahita sy ahatsapa ny mety ho fahasambarana ianao.
Tsy hoe akory ny fananana an'izao sy izao no mahasambatra fa ny fahaizana mionona izay eo @ tena ary tsy mety ny mihaino ny vavan'ny sasany satria ny fiainanao tsy ho fiainany na oviana na oviana ka izay mahasoa anao no jereo fa aza mihaino ny vavan'ny sasany.
hery - 02/08/2003 20:03
Tsy voatery hanambola sy hanankarena vao ho sambatra... ary misy aza ny manambola sy manam-pahaizana tsy sambatra akory.
Tsy izay tsy enjehan'ny fiaraha-monina koa no atao hoe sambatra. Misy ny olona sambatra ao anatin'ny fanenjehana... misy sambatra ao anaty fijaliana... misy aza sambatra ao anatin'ny fahafatesana...
Satria... ny fahasambarana dia tsy miankina amin'ny olona ivelany, fa miankina amin'ilay filaminam-panahy ao anaty.
Ianao ihany no antoky ny fahasambarana ho anao. Rehefa milamina ao anaty ao ianao na misiy manakorontana avy ety ivelany aza dia sambatra ianao izay.
Aza miandry holazain'ny olona hoe "eee sambatra i anona"...
Dia mitsikia... fa ny "TSIKY" koa mahasambatra.
manakasina - 03/08/2003 13:07
ny tena olana amitsika zatovo malagasi dia ny tsy fahaizana ny atao hoe FITIAVANA hahy ka afangarotsika ny vola sy ny fitiavana ary ny fitiavana sy ny voninahitra tadidio anefa fa raha vao mampiaraka anireo isika dia fahasambarana mandalo ihany satria ny vola voninahitra dia misy fertany avokoa fany fitiavana dia natao ho mandrakizay
xxx - 04/08/2003 14:43
Izaho izao sambatra dia ohatra ny hoe tsy mino ahy ny olona fa hoe mbola kely hono ka tsy mahalala fiainana. Fa tena hafa ilay fiainana ao anatin'ny fitiavana marina e. Tena hafa.
noasy - 05/11/2003 20:11
Ny fiainana ao anatin'ny fitiava tena izy no ananana fahasambarana . Tsy misy dikany ny vola sy ny harena rehefa tsy manana fitiavana ianao . Fitiavana no base n'ny hasambarana . maika moa miampy vola sy fahaizana tena ok
rija - 17/11/2003 21:30
Tsy voatery, fa mba au moins manam-pahaizana.
fijo - 18/11/2003 21:31
anisan'ny mahasambatra ireo,fatsy hoe rehefa manana ireo dia sambatra.
rfanjav - 19/11/2003 21:47
sambatra izay mahay miaina @ ananany!
fijo - 20/11/2003 10:15
marina izany.saingy tsara ny mitady ambonin'ny ananana.
xxx - 22/11/2003 17:29
Hitanao ihany fa h@ izao d mbola hita mifaritra eny ihany ny "classe sociale" ka eo foana ireo oln miseho ambony ka manambany ny kely!
Fa ataovy ao an-dohanao fa na ambony na ambany tsy any ny olana, na mahay enao na tsia, efa tojo izay anjaranao enao eo @ fiainana d sambatra e!
fijo - 25/11/2003 10:11
araka ny fahitako ilay manoratra eto ambony io dia tsy tokony hiezaka mihintsy ny olona fa dia tokony hiaritra izay misy eo.izay toe-tsaina izay no tsy nampivoatra ny taty afrika.ny fikatsahana ny ambony kokoa tsy midika hoe manambany ny sasany.io ilay toe-tsaina kominista be,izay efa nialan'ny rehetra,na ny tany chine aza efa niala tao.
kally - 06/12/2003 14:06
Ny fahasambarana dia fantatra amin'ny fitsaitsaikany,nony injay niala teo aminao izy.Izany hoe matetika isika eo no ho eo dia tsy nahalala hoe sambatra,nony tsy azontsika hiverenana intsony vao hoe sambatra ery aho t@ izany!...sniff!